कपाल झरेर हैरान हुनुहुन्छ ? त्यसो भए यसो गर्नुस् - Deshko News Deshko News कपाल झरेर हैरान हुनुहुन्छ ? त्यसो भए यसो गर्नुस् - Deshko News
कपाल झरेर हैरान हुनुहुन्छ ? त्यसो भए यसो गर्नुस्
हिजोआज युवावस्थामा नै कपाल झर्ने समस्याले अधिकांस पीडित र चिन्तित् छन् । कपाल झर्ने समस्या कसैका लागि तनाव र चिन्ताको कारण पनि हुनसक्छ । वंशानु गुणका कारण पनि युवावस्थामै कपाल झर्न सक्छ । तर महिलाहरुमा भने यो समस्या ३० वर्षको उमेरपछि देखा पर्न सक्छ ।
यस्तै, खानपान, प्रदूषित पर्यावरण, औषधिहरुको नकरात्मक प्रभाव तथा अन्य केही कारणले पनि कम उमेरमै कपान झर्ने समस्या देखिन सक्छ । यदी तपाईंलाई पनि कपाल झर्न समस्या र कपाल झरिसकेको छ भने यी दुई घरेलु उपाय अपनाउनुस् ।
१, जटामांसीलाई नरिवलको तेलमा उमाल्ने । सेलाएपछि यो तेललाई एउटा बोतलमा राख्ने । र दैनिक रुपमा सुत्नु अघि कपाल झरेको स्थानसहित टाउकोमा यो तेलले मालिस गर्ने । यसो गर्दा कपाल झर्ने समस्या हट्नुको साथै झरेको स्थानमा फेरि आउने सम्भवना रहन्छ ।
२, नुन र कालो मरिच एक एक चम्चा र नरिवलको तेल पाँच चम्चा मिलाएर कपाल झरेको स्थानसहित टाउकोमा लगाउँदा पनि कपाल झर्ने समस्या हुँदैन । र कपाल झरिसकेको स्थान पनि फेरि कपाल आउने सक्ने सम्भावना हुन्छ ।